लकडाउनको मोडालिटी चेन्ज हुँदै: असार १ गते देखि खुकुलो हुँदै ! पहिलो चरणमा यी क्षेत्र खुल्दै….. – SUDUR MEDIA
June 8, 2021 June 8, 2021 AdminLeaveaComment on लकडाउनको मोडालिटी चेन्ज हुँदै: असार १ गते देखि खुकुलो हुँदै ! पहिलो चरणमा यी क्षेत्र खुल्दै…..
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर आदेशको पूर्ण कार्यान्वयनमा ७७ वटै जिल्लाका प्रहरी खटिएको बताउनुहुन्छ । अझै पनि मानिस आफ्नो स्वास्थ्यका लागि सचेत नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रहरी देखे मात्रै मानिस सचेत हुने त्यसपछि लापरवाही गर्ने क्रम कायम रहेको बताउनुभयो । चिकित्सकले आफू बाहेक सबै कोभिड सङ्क्रमित हो भनेर व्यवहार गर्न नागरिकसँग अनुरोध गरिरहेका छन् । रासस